လှပသောသံစဉ် | Shwe Canaan TV
00Truth Monday, 28 October 2013
ဇြန္လ(၁၅)ရက် ၂၀၀၉ခုနှစ် နွေဦးပေါက်တွင် စူဆန်ဘွိုင်းသည် Britains Got Talent အင်္ဂါနေ့ အစီ အစဉ်၌ ပါ၀င်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ အခြားပြိ...
ဇြန္လ(၁၅)ရက် ၂၀၀၉ခုနှစ် နွေဦးပေါက်တွင် စူဆန်ဘွိုင်းသည် Britains Got Talent အင်္ဂါနေ့ အစီ အစဉ်၌ ပါ၀င်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ အခြားပြိုင် ဖက်များနှင့် ယှဉ်လျှင် သူမပုံစံက ရိုးရိုးလေးပါ လှပသောသံစဉ် သီချင်းစဆိုရန်မိုက် ကိုနှုတ် ခမ်းနှင့်တေ့ လိုက်ချိန် အထိသူမကို မည်သူကမှ မျှော်လင့်မထား
ဖတ်၇န် -၁ပေ၂း၉-၁၂ ပါ။
သို့သော် သူမသီချင်းစတင်၍ဆိုလိုက်သောအခါ အသံသြဇာနှင့်ပြည့်စုံပြီး သာယာနာ သင်တို့မူကားမှောင် ပျော်ဖွယ်တေးသံက ခန်းမတစ်ခုလုံးကို၌ လွှမ်းခြုံလျက် အကဲဖြတ်ဒိုင်
လူကြီးများကို ဖမ်း မိုက်ထဲမှအ့ံ ဖွယ်သော စားလိုက်သည်။ ပရိသတ်အားလုံးလည်း မတ်တပ်ရပ် အားပေးခဲ့ကြသည်။
အလင်းတော်သို့ မထင်မှတ်သူထံမှ စမ်းရေစီးသံအလား ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိသည့် လှပသောသီချင်းသံ
ခေါ်သွင်းတော်မူသော ပေါ်ထွက်လာခြင်းကြောင့် အားလုံးအံ့သြသွားကြရသည်။
သူ၏ဂုဏ်ကျေးဇူးများ ကျွနု်ပ်တို့ထဲမှ ယေရှုရှင်၏တင့်တယ်ခြင်းတို့အပေါ်ထွက်မည်ဟုမထင်ရသော်
ကိုဖော်ပြစေခြင်းငှာ.. လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုရှင်၏ တင့်တယ်ခြင်း၊ လှပခြင်းတို့ဖြာစီးသော အရင်း ရွေးချယ်တော်မူသော အမြစ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်အောင် ကိုယ်တော်ရှင်ကဘ၀ဇာတ်ခုံပေါ်တွင် တစ်လှည့် အမျိုးဖြစ်ကြ၏။ . နေရာယူကာမယုံကြည်သူပရိသတ်ကြီးရှေ့မှောက်ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အသက် ၁ပေ ၂း၉ . တာမှထွက်ပေါ်လာသည့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ မေတ္တာနှင့်ကျေးဇူးတော်ကို ကျွနု်ပ်တို့
သမ္မာကျမ်းစာ မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ဘ၀အသိုင်းအ၀ိုင်းကြီးထဲတွင်ရှိနေသူများအားလုံး
နေဟမိ၁-၃ ကျွန်ုပ်တို့ မှောင်မိုက်ထဲမှ အံ့ဖွယ်သောအလင်းတော်သို့ ခေါ်သွင်းတော်မူ
တ ၂း၁ - ၂၁ သောသူ၏ဂုဏ်ကျေးဇူးများကို ဖော်ပြစေခြင်းငှာ ရွေးချယ်တော်မူသော အမျိုးဖြစ်ကြ၏ (၁ပေ ၂း၉) ဟူသည့် ရှင်ပေတရု၏သတိပေးစကားကို ကျွန်ုပ်နှစ််ခြိုက်လှသည်။
အများမျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့ ယေရှုကို ထင်ပေါ်လွင်စေမည့် အရင်းအမြစ်မဖြစ်နိုင်ဟု သင့်ကိုယ်သင် ထင်မှတ်ထားလည်း ကိုယ်တော်ကို သင့် အထဲဖြတ်သန်းစီးဆင်းခွင့်ပေးပါက ကြည့်နေကြသော လောကသားတို့ မတ်တပ်ရပ်ကာ သတိပြုတွေ့မြင်ကြလိမ့် မည်။ ____ Joe Stowell
ယေရှု၏အံ့ဖွယ်ချစ်စိတ်၊ သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် တင့်တယ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်ထဲမှာ
မြင်ရစေ။သခင်ယေရှု၏တင့်တယ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်အထဲ မြင်ရသည့်တိုင်
. အို၀ိညာဉ်တော်၊ ကျွန်ု်ပ်၏ဇာတိသဘောကို သန့်စင်ပေးပါ။ ___ Orsborn .
မျှော်လင့်မထားသော၊ မထင်ရသောသူများထံမှ ထွက်ပေါ်တတ်၏....။
From fwd mail.
Shwe Canaan TV: လှပသောသံစဉ်